ဒီလိုလေးတိုက်ပင်းရိုက်လိုက်တာပဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒီလိုလေးတိုက်ပင်းရိုက်လိုက်တာပဲ
Posted by မောင် ပေ on Jul 18, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 17 comments
ဒီကနေ့ … ၁၈ ရက် ဂျူလိုင် ၂၀၁၃ ထုတ် စံတော်ချိန် သတင်းစာထဲမှာ ကာတွန်းတစ်ကွက် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာကို ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ် တဲ့
ဒုစရိုက်မှုတွေကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ကျနေတဲ့ ဒုစရိုက်ကောင်တွေကိုတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မပေးသင့်ပါဘူး တဲ့
စာဖတ်သူတွေတော့ ၊ အဲဒီ ဒုစရိုက်သမား တွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့် ၊ မပေးသင့် ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ကြမလဲ ဆိုတာကို မသိပေမယ့် ၊ ကျုပ်ကတော့ ဒုစရိုက်သမားတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မပေးစေချင်ဘူးဗျ ။
ပထမဆုံး ဦးသိန်းစိန်ကြီး သမ္မတ ဖြစ်ပြီး မကြာခင် အကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေ ပေးခဲ့တာ မှတ်မိကြဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
အဲ့ထဲမှာ ခိုးဆိုးလုယက်လူသတ်မုဒိန်းသမားတွေလဲ ပါလာတာပေါ့…
အဲ့တုန်းက မှတ်မိသလောက် ၊ သူခိုးတွေ တော်တော် သောင်းကျန်းကုန်တာကလား ။
အခု ဒီနေ့ အချိန်မှာလဲ ၊ ပေါ်တင်လုယက်မှု တွေ နေ့ စဉ်လိုလို ကြားကြရမှာပါ ။
ဘယ်လောက်ထိ အတင့်ရဲလာသလဲ ဆိုရင် ၊ လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲ ဟန်းဆက်အကောင်းလေးနဲ့(ဈေးကြီးပေးရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ ပေါ့) အင်တာနက်ထိုင်သုံးနေတုန်း ၊ ဖုန်းပြောနေတုန်းမျိုးမှာကို ၊ လက်ထဲကနေ လုပြီးပြေးတဲ့အထိ ကို အတင့်ရဲကုန်ကြပြီ ။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုလို့ ၊ ကျုပ်သိထားသမျှလေး နဲနဲဝင်ငံရရင် (ငံကြည့်တာပေါ့နော)
ဒီမိုကရေစီဘိုးအေနိုင်ငံကြီးတွေမှာ ၊ ရဲ က အာဏာအရှိဆုံး ဆိုပဲဗျ ။
တရားရုံးသွားရမှာ ၊ တရားဆိုင်ရမှာကိုလဲ တော်တော်လေးကြောက်ကြတယ်တဲ့ ။ ရဲ ကိုလဲ အပြည့်အဝ ယုံကြည်အားကိုးမှု ရှိကြသတဲ့ ။
မြန်မာနိုင်ငံက ရဲတွေကရောဗျာ ။
တစ်ရက်က လဲ ၊ ကူညီပါရစေ လို့တစ်နိုင်ငံလုံး သိနေကြတဲ့ ၁၉၉ ဖုန်းနံပါတ် ကို အကူအညီလိုလို့၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ မှုခင်းဖြစ်တာကြုံလို့၊ ဖုန်းလှမ်းဆက်တော့ မကိုင်ဘူးဆိုပဲတဲ့ဗျာ ။
စကားမစပ် ၊ ကျုပ် ဖုန်းထဲမှာလေ ၊ ကျုပ်တို့ မြို့ က ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းဖုန်းနံပါတ်လေးတွေ ထည့်ထားတယ်ဗျ ။
တစ်ရက်က ညပိုင်း ဘီယာထိုင်သောက်တော့ ၊ ဘီယာဆိုင်မှာ ငမူးသုံးကောင် ထဆူပူသောင်းကျန်းကြပါလေရော ။ ဝိတ်တာလေးတွေ နဲ့ဆိုင်မန်နေဂျာ က တောင်းပန်တာလဲ မရ ။
တောင်းပန်မှ ပိုဆိုးလာတယ် မှတ်တာပဲ ။
အဲ့ သုံးကောင် ဘာကောင်တွေလဲ လို့၊ ဆိုင်က ဝိတ်တာလေးတွေကို မေးကြည့်တော့ ၊ ရှေ့ နေတွေ တဲ့ဗျာ ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပွဲပိုဆူလာရာမှာ ၊ ဘေးမှာ ထိုင်စားသောက်နေတဲ့ ဝိုင်းတွေကိုပါ စိတ်ရှုပ် ဒေါသဖြစ်စရာ ဖြစ်လာတာနဲ့၊ ဆိုင်ရာမြို့ နယ် ရဲစခန်း ကို ဖုန်းလှမ်းဆက် အကြောင်းကြားတော့ ၊ ချက်ချင်းလွှတ်လိုက်ပါမယ်တဲ့ ။
ဒါနဲ့ ၊ ရဲဘယ်နှစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ဘယ်လိုရှင်းမလဲ ဆိုတာကို ထိုင်စောင့်ကြည့်နေလိုက်တော့ ၊ တစ်ကောင်မှ ရောက်မလာဘူး ။ (မဆိုင်သောရဲများအတွက် ၊ ပမာဏ ကို ကောင်အဖြစ် သုံးမိသွားတာကို နားမလည်ချင်စွာနဲ့ နားလည်ပေးကြပါ ၊ မဟုတ်လဲနေဗျာ)
နောက်မှ သိရတာက ၊ မအေပေး မူးဆူသောင်းကျန်းတဲ့ ရှေ့ နေသုံးကောင်က အဲ့မြို့ နယ် က ရဲစခန်းက ဒုရဲအုပ်တွေ ဘာတွေ နဲ့ ဘော်ဒါတွေတဲ့ ၊ ဒါကြောင့် ရဲက လာမဖမ်း အရေးမယူတာတဲ့ ။
ဒါပေသည့် ၊ အဲ့လို အဲ့သုံးကောင် သောင်းကျန်းတာ တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်လောက်ကြတော့ ၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ရောက်လာတယ်ဗျ ။
ဆိုင်ပိုင်ရှင် က လဲ ဇ သေးသူမဟုတ် ။ သူ့ ဆိုင် လာပြီး သောင်းကျန်းတဲ့ ကောင်တိုင်းကို ဗျင်းလွှတ် တဲ့ ဖြစ်ရပ်များလဲ ရှိခဲ့တော့ ၊ ကျုပ် လဲ ပွဲကောင်းတွေ့ ရပြီပေါ့ ။
နောက်ပြီး ၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင် က လဲ အဲ့ဒီ့ ရှေ့ နေများ ရဲ့ ဘော်ဒါရဲများ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ တစ်စခန်းလုံးကို ပိုင်သူ တစ်ယောက်ဆိုတော့ ၊ ပါဝါချင်းယှဉ်ပြီပေါ့ဗျာ… (အချိုရည် ပါဝါ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော)
ဆိုင်ရှင်က ဦးစွာတော့ တောင်းပန်ရှာတာပေါ့ ။
ငါ့ညီတို့၊ အကို က ဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်ပါ ၊ မင်းတို့ မကျေနပ်တာ စိတ်တိုင်းမကျတာ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ အကို တောင်းပန်ပါတယ် ၊ ငါ့ညီတို့ ပြန်ကြပါတော့ … ဆိုပြီး အေးအေးလူလူပြောရှာပါတယ်
အဲ့ချိန်မှာ ၊ ရဲ ၃ ယောက် လောက် ရောက်လာပြီဗျ ။ ဖမ်းခြင်းပြုခြင်း ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးနားကနေပဲ ရပ်ကြည့်နေကြတယ် (ချိုလားမွှေးလားအေးလား = အိုင်စခရင် ကို ပြောပါတယ်)
ရှေ့ နေ သုံးကောင်ထဲက တစ်ကောင်က
“ ဆိုင်ရှင်ဖြစ်လဲ xီး လုပ်ရမှာလား ” ဆိုပြီး ပြေလည်ကြောင်း ပြောနေတဲ့ ဆိုင်ရှင်ကို စဆဲပါလေရော
ဆိုင်ရှင်ကလဲ နဂိုကတဲက လက်ယဉ်နေတဲ့လူဆိုတော့ ၊ စထိုးပါလေရော ။
အဲ…အဲ ။ ဆိုင်ရှင်လဲ စထိုးရော ၊ ဘေးနားရပ်ကြည့်နေတဲ့ ရဲတွေက ၊ ဆိုင်ရှင်ထိုးတဲ့ကောင် ကို အနောက်ကနေ ဝင်ချုပ်ပေးကြတယ်ဗျ ။
တော်တော်တော့ ကြည့်လို့ ကောင်းသား ။ ဟဲဟဲ
ဒီလိုနဲ့ ၊ ဆိုင်ရှင့် လက်သီး ၃ချက်လောက် ထိသွားတဲ့အခါမှာတော့ ၊ မူးဆူရှေ့ နေ သုံးကောင် လဲ ၊ အခြေအနေမှန် ကို ရိပ်စားမိသွားပြီး ၊ သူရို့ ဘာသာ ပြန်သွားကြပါတော့တယ် ။
ဆရာဝန်တွေ လူသတ်မှုကျူးလွန်ရင် ပြစ်ဒဏ်ပိုကြီးသတဲ့ ။
ဥပဒေကို နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ရှေ့ နေတွေ ၊ ဥပဒေမဲ့ သောင်းကြမ်းကုန်ကြရင်ကော
ဘယ်လို ပြောကြမလဲ ဆိုတာ သိချင်စမ်းပါဘိဗျာ
******* ဒီ အန့်*******
သောက်တလွဲ နိူင်ငံမှာ သောက်တလွဲ အဖြစ်အပျက်တွေက နေ့စဉ်နဲ့ အမျှပါပဲ……။
ရှေ့နေကျင့်ဝတ်ဆိုတာရှိပါတယ် အဲဒီလိုသိက္ခာမဲ့စွာပြုမူရင်ရာသက်ပန်လိုင်စင်ပြုတ်ပါတယ် ဥပဒေအရပြောတာပါ ရုံမင်းတစ်ထိုင်အပြစ်ပေးခံရရင်တောင် လိုင်စင်ပြုတ်ပါတယ်
ပုဒ်မ ၅၀၃ ၅၀၄ ၅၀၅ အရဆိုရင် ထောင်ဒါဏ် ၂ နှစ်အထိချလို့ရပါတယ် တရားစွဲမည့်သူတော့လိုတာပေါ့နော်
ဥပဒေအထက်မှာလူတွေ. လူတန်းစားတွေရှိနေသမျှ.. ဒီလိုအကျိုးဆက်တွေ..ဆင့်ဆင့်လာပါတယ်…။
ကယ်လီဖိုးနီးယားကတော့.. အကျဉ်းသားတွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်.. ပေးချင်ချင်… မပေးချင်ချင်.. ပေးနေရပါတယ်..။ ထောင်မှမဆန့်ပဲကိုး..။ ထောင်ချဲ့ဆောက်ရအောင်လည်း..
Judges stand firm on California prison crowding relief plan – Yahoo …
Jul 3, 2013 – (Reuters) – A federal court on Wednesday refused to back down from an order requiring California to reduce prison overcrowding by the end of ..
California to challenge order to release 10,000 inmates by year’s …
Jun 20, 2013 – California Gov. Jerry Brown will seek an immediate stay of an “unprecedented” federal court order to release almost 10000 inmates to relieve …
ရှေ့နေလည်း လူဗဲကွ…. ကျုပ်တို့ ဦးပါလေရာဂျီး ပိုသိတယ်.. ဘာတဲ့ တခါက ပြောတာ… အလုပ်မှာ ကြီးကြီးမာစတာ ဖြစ်ဖို့ဆို ဥပဒေ တတ်ကျွမ်းနားလည်ဖို့ လိုသတဲ့… အမွန်ဆို သူ့စကား နားထောင်ပီး ဘီးဇိနက်လောတောင် ပြီးသွားပြီ….
နင်က ဥပဒေကို လေးစားဖို့ နေနေသာသာ ရှေ့နေ မကောင်းဂျောင်း လျောက်ဖွနေမှတော့ ခက်သေးဒယ် ကပေရေ……
စကားလုံးလေး ကြားဖူးတယ် ။
ဟီ ဟိ ဥပဒေကြောင်းအရ မလျော်ကန်မှန်းတော့ သိပေမည့်…
ဆိုင်ရှင် ထန်းသီး ကျွေးလိုက်တာ အားရတယ်ဗျာ…
အဲ… ရဲလား… ချဉ်လွန်းလို့ မပက်သက်ပါရစေနဲ့…
ခေါင်းစဉ်နဲ့ အညီလွတ်ပေးတာကို ထောက်ခံတယ်ဗျာ။
ဥပမာ- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
သန့် သန့် ပဲ ပါပစေ။ တခြားအမူ့တွေမပါစေနဲ့။
– ပြစ်မူ့ကျုးလွန်သူများ အား သဘောမျိုးဆို အဲဒါနဲ့
ခုနရှေ့နေ အမူးသမားတွေ နဲ့ ဆိုရင် တရားရုံးပို့ နိုင်အောင်
လုပ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲ။ မီဒီယာခေတ်ပဲကို။ ကိုယ့်ဘက်က
တရားဝင် ရောင်းခွင့် တို့ ဘာတို့တော့လုပ်ထားဖို့လိုတယ်။
ကျုပ်သာပိုင်ရှင်ဆိုရင် ဒီကိစ္စကိုမရှင်းဘူး။ တိတ်တ်ိတ်လေးဗီဒီယို
မှာ။ ဘေးဝိုင်းကထတွယ်လဲ တွယ်ပေ့စေ ။ရဲလဲရောက်နေပြီကိုး။
နောက်မှ ဗီဒီယိုကို လိုသလိုအသုံးချမယ်။
ဟိုတလောကက လက်ကျန်သခိုးလူဆိုးတွေလွှတ်လိုက်ပြီးကတဲက ရန်ကုန်မှာခိုးမှု့တွေ ဖောက်ထွင်းမှု့တွေ များလာတာသတိထားမိတယ်။ ငါလဲလွှတ်စေချင်ပါဘူးတကယ်ပါ။ သူတို့က သူတို့အပစ်ရှိလို့ပစ်ဒဏ်ခံရတာမို့ ဘာမှအချိန်စောမလွှတ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
တရုပ်စကားပုံလေးကြားဘူးတာ တောင်တစ်လုံးထက် တစ်လုံးက ပိုမြင့်သွားတယ်တဲ့
အဲလို့ ဘဲ သူ့ထက်သူ ပိုပိုင်တဲ့လူက သာသွားတာပေါ့ဗျာ
တကယ်တော့.. ရှေးကလူတွေ.. ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်.. တခုထဲသာရှိကြောင်း.. မသိကြလို့ပြောကြတာပါ…
Highest Mountains – The Highest Mountains on Each Continent
geography.about.com › … › Geography › Statistics, Lists, & Trivia‎
Highest Mountain in the World (and Asia) Everest, Nepal-China: 29,035 feet / 8850 meters. Highest Mountain in Africa Kilimanjaro, Tanzania: 19,340 feet / 5895 …
သဂျီးက ကိုယ်တောင်တာ မကြည့်…. အခြားတောင် သွားကြည့်သဂိုး….. အဲသာပြောဒါပေါ့… ရုပ်ဝါဒီများ ကိုယ့်မျက်ချေး မမြင် သူများမျက်ချေးပဲ လိုက်ကြည့်ဒယ်….. ခက်သေးအိ…
ဥပဒေ ဆိုလို့ ဥပဒေ အထက်ဘာမှ မရှိရလို့တော့ ကြောကြတာဘဲ။
ကိုယ်ပျောက်ဝိဇ္ဇာ တွေ ကိုထည့်ပြီး Count လုပ်လို့ ရမရ တော့ မသိ။
ဒီခေတ် ရဲတော်တော် များများဟာ ဥပဒေများ၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး နဲ့ရဲလက်စွဲ စတာတွေကို သာမန်လောက်တောင်လေ့လာတတ်ကျွမ်းမှုမရှိဘူး၊အဲဒီတော့ ဥပဒေအရမလုပ်တတ်ကြဘူး၊လုပ်ပြန်ရင်လဲ သောက်တလွဲတွေများတယ်၊အဲဒီတော့. မလုပ် မရှုပ်မပြုတ်ပေါ့ဗျာ
ဘယ်လို ပြောကြမလဲ ဆိုတာ သိချင်စမ်းပါဘိဗျာ…..
ထင်တိုင်းကျဲချင်တဲ့ ကောင်တွေ…ခုတော့ ဘာတတ်နိုင်သေးသတုံး….